सेक्स गरिसकेपछि पीडा हुन्छ ? सावधान ! यसले ठूलो समस्याको रुप लिन सक्छ | Lifemandu
सेक्स गरिसकेपछि पीडा हुन्छ ? सावधान ! यसले ठूलो समस्याको रुप लिन सक्छ
| सोमबार, १० बैशाख, २०७५
किनकि, यसले ठूलो समस्याको रूप पनि लिन सक्छ । चिकित्सकका अनुसार सेक्सुअल रूपमा सक्रिय महिलाले वर्षमा कम्तीमा तीनपटक स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नुपर्छ । र, चिकित्सकसँग महिनावारी, शिशुको जन्म र लैंगिक स्वास्थ्यबारे राम्रोसँग खुल्नुपर्छ ।
त्यस्तै, सम्भोगपछि पीडाको समस्या भए त स्वास्थ्य परीक्षण गरिहाल्नुपर्छ । योनिको संक्रमण, ओबेरियन सिस्ट या एन्डोमेट्रिसको कारण पनि यस्तो हुन सक्छ ।
सिस्ट या फिन्ब्रोइडस
फिन्ब्रोइडस भनेको नन कन्सेरस ट्रयुम हो, जुन महिलाको युटेरसमा हुन्छ । यो आमसमस्या हो, जसबाट कुनै खतराचाहिँ हुँदैन । सिस्ट ओभरीमा हुन्छ । कहिलेकाहीँ सिस्ट र फिन्ब्रोइडस दुवैले सम्भोगका क्रममा पीडा दिने गर्छन् । फिन्ब्रोइडसका कारण महिनावारीका क्रममा अत्यधिक रगत बग्न सक्छ ।
यसकै कारण सम्भोगपछि पेट पनि दुख्ने गर्छ । र, सिस्ट फुट्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकसँग परामर्श लिइरहनुपर्छ ।
पिरियडका समय असावधानीपूर्वक शारीरिक सम्पर्क राख्दा पनि पेटमा दुखाइको समस्या हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सम्पर्क राख्दा गर्भाशयमा चोट पुग्ने खतरा हुन्छ । किनभने, यस्तो समय महिलाको योनि निकै लचिलो हुन्छ ।
जसका कारण आरामसँग सम्भोग गर्न सकिने भए तापनि पछि समस्या निम्तिन्छ । यसले गर्भाशयमा पनि चोट पुग्न जान्छ ।
जसका कारण पेटको दुखाइ हुन्छ । त्यसैले संक्रमितको समस्या भएमा सम्पर्कको अवस्थामा सावधानी अपनाउन जारुरी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्पर्क राख्दा सुरक्षा प्रयोग गर्न पनि जरुरी हुन्छ, ताकि संक्रमण नफैलियोस् ।
एजेन्सी । यदि तपाइँ विहान अवेर सम्म सुत्नु हुन्छ र विहान उठ्न कठिन हुन्छ भने सावधान हुनुस् । यस्तो बानीले तपाइँलाई छिट्टै गम्भिर स्वास्थ्य समस्या पैदा हुन सक्छ । यदी तपाइँलाई विहान उठ्न कठिन हुन्छ
तपाईलाई यस्ता लक्षण त देखिएको छैन ? सावधान एचआईभी हुनसक्छ
एजेन्सी । एचआईभी र एड्स आज विश्वको लागि एक गम्भिर समस्या हो । कति विकासशील र अविकसित देशको लागि एचआईभी ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । अविकसित देश मात्र होइन विकसित देशमा पनि यो रोग धेरैको मृत्य
‘सेक्स’ गरिसकेपछि महिलाले भुलेर पनि नगर्नुस् यस्तो काम
एजेन्सी । महिलाहरु सधैँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर चिन्तित रहने गर्छन् । साथै उनीहरुलाई आफ्नो घरपरिवारको पनि उत्तिकै चिन्ता र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।